Manatsara ny siosika ve ny SEO?
Ireo mpamorona sy mpividy an-tserasera dia mijery tsy tapaka ireo fomba vaovao handroahana ny seo SEO amin'ny pejy voalohany amin'ny karoka fitadiavana. Ny mahaliana dia ny hoe rehefa tonga any amin'ny top 10 voalohany aza izy ireo, dia mbola mila mamorona votoaty vaovao sy manan-danja izy ireo mba hanohanana ny toerany.
Na dia izany aza dia zava-dehibe ho an'ny tompon'ny tranonkala ny mahatakatra fa tsy ampy ny famokarana votoaty lehibe. Ny votoaty tsara dia mitaky fanentanana mavitrika. Zava-dehibe ny mampiroborobo ny votoatin'ny olon-kafa mba hanamafisana ny tanjona sosialy.
Andao hiatrika izany: rehefa manoratra sy mamoaka lahatsoratra, lahatsoratra bilaogy, eBooks, taratasy fotsy na fotografia mahasoa, fomba tsara indrindra ahafahan'izy ireo manoloana ny vondron'olona kinendry dia amin'ny alalan'ny media sosialy - люблино мебель интернет магазин.
Raha ny filazana dia mandeha, miahy ny fizarana. Sarotra ny mandà fa ny siansa ara-tsosialy, sy ny media sosialy, dia miantraika amin'ny SEO. Ireo manam-pahaizana semistra dia manaiky tanteraka ny fanambarana nataon'ilay mpandraharaha ara-barotra, Jay Baer, ​​izay nanambara indray mandeha fa firehan-jotra izany ary ny gazoline sosialy.
Ahoana no azoko hanampiana ireo siantifika sosialy hampitombo ny SEO?
1. Ampifanaraho ny fizotran'ny fizaràna ny votoatiny
Ny zavatra voalohany tokony hataonao mba ahafahana mitondra fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranonkalanao dia ny hampandeha tsara ireo mpampiasa hizara ny votoatinao amin'ny alalan'ny media sosialy. Raha azo atao, aza avela hitsidika ny tranonkalanao ao amin'ny Facebook ny mpitsidika. Ny ankamaroan'ny mpamaky dia tsy manana fotoana na faharetana hanaovana izany. Vokatr'izany dia ho very ny fahafahana hampiroborobo ny votoatinao noho ny traikefan'ny mpampiasa ratsy.
Tadidio, rehefa miahy ny mpitsidika anao ianao ary manome azy ireo mora ny mizara ny votoatinao, dia azo inoana kokoa ny mizara ny hafatrao amin'ny vondrom-piarahamoniny sosialy, mamoaka fampitam-baovao momba ny fifandraisana amin'ny tranokalanao.
2. Mampivelatra ny solonananao
Backlinks dia rohy fampidirana avy amin'ny loharano hafa mankany amin'ny pejin'ny tranonkala. Saika ny fitaovam-pikarohana rehetra, anisan'izany ny Google, Yahoo, ary Bing, dia mandinika ny habetsaky sy ny kalitaon'ireny backlinks ireny rehefa mametraka pejy. Raha tsorina, pejy iray ahitana rindranasa avo lenta avo lenta kokoa no manjaka kokoa ny fikarohana. Ankoatra izany, raha mamaky ny tranokalanao azo itokiana amin'ny mpamaky ny mpamaky dia hanaraka ny rohy ny motera fikarohana, mametraka ny votoatiny, ary mametraha ny votoatinao mifanaraka amin'izany.
3. Ampitao ny tranonkalanao ho an'ny fifanakalozana finday
Amin'ny 2017, ny fifangaroana amin'ny sehatry ny varotra finday, ara-tsosialy ary ara-barotra ao an-toerana SEO toy ny taloha. Amin'izao andro izao, ny ankamaroan'ny olona dia mikaroka finday noho ny finday. Aleony mitady fikarohana sy mividy azy. Ny fitaovam-pitadiavana dia mankasitraka ireo loharanom-pitaovana azo ampiasaina amin'ny finday avo lenta kokoa. Ataovy azo antoka fa manome vintana fomba mora hizarana ny votoatiny ny tranonkala finday ao amin'ny tranonkalanao.
Ireo tompon-tranonkala manana tranonkala maro sy tranonkala ao an-toerana ho an'ny votoatiny, mila mieritreritra ny fomba hanatsarana ny klioba sy ny siantifika sosialy amin'ny tranonkala. Zava-dehibe izany satria ireo voalaza etsy ambony ireo no lohahevitra manan-danja izay manimba ny fikarohana ao amin'ny faritra.
Ny farany fa tsy ny zavatra kely hodinihina indrindra dia ny porofo ara-tsosialy izay manome ny fahefana amin'ny lahatsoratra, bilaogy, ary lahatsary YouTube amin'ny fampisehoana fa sarobidy sy azo itokisana izy ireo. Ny fe-potoana ara-tsosialy dia manondro ny votoatinao toy ny fanamarihana, fanehoan-kevitra, ary quotes avy amin'ny manam-pahaizana manokana. Ny porofo ara-tsosialy dia toy izao manaraka izao: raha mahita olona an-jatony no mizara ny votoatiny, dia horoahina izy ireo hanamarina izany ary hizara izany.